गर्मीमा प्याज सेवन गर्नुहोस् ! यस्ता १० समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ….::Leading Nepal News
गर्मीमा प्याज सेवन गर्नुहोस् ! यस्ता १० समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ….
एजेन्सी । प्याजमा उल्लेख्य मात्रामा फायटोकेमकल्स, भिटामिन सि, फोलिक एसिड, डायटरी फाइबर, क्याल्सियम र फलामजस्ता पोषक तत्व हुन्छ । पोषणविद्हरुका अनुसार गर्मीका दिनहरुमा हरेक दिन कम्तिमा एउटा काँचो प्याज खानाले यसबाट प्राप्त हुने पोषक तत्वहरुका कारण कयौं स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुबाट बच्न सकिन्छ । यस्ता छन् गर्मी मौसममा प्याज सेवन गर्दा हुने १० फाइदाहरु
१. डिहाइड्रेसनबाट बचाउँछ- दही अथवा नौनीसँग काँचो प्याज खानाले शरीरमा आद्रता पैदा हुन्छ । यसले पानीको कमी अथवा डिहाइड्रेसनबाट बच्न सघाउँछ । २. गर्मीबाट बचाउँछ- काँचो प्याज खानाले शरीरको तापक्रम कायम राख्न सघाउँछ । यसबाट प्रचणड गर्मीबाट बच्न सकिन्छ । ३. लू लाग्नबाट बच्न- लू लाग्नबाट बच्न पूरै शरीरमा र खासगरी पैतालामा प्यासको रस दल्नुपर्छ । यसबाट काफि फाइदा लिन सकिन्छ ।
४. रिंगटा लाग्नबाट बच्न- गर्मीमा रिंगटा लाग्ने समस्या अत्यधिक हुन्छ । प्याजको रस कागती र पुदिनाको रससँग मिलाएर पिउनाले रिंगटा लाग्ने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । ५. नाकबाट रगत आउने समस्याबाट बच्न- प्रचण्ड गर्मीका कारण नाकबाट रगत बग्ने समस्या हुन्छ । रगत आएको बेला काँचो प्याज सुँघ्नाले यो समस्याबाट केही रात मिल्छ । ६.पिसाब पोल्ने समस्याबाट बच्न- प्याजको रस पानीमा मिलाएर पिउनाले गर्मीका कारण हुने पिसाब पोल्ने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
७. घमौराबाट बच्न- पानीमा प्याको रस र चिनी घोलेर पिउनाले घमौराबाट बच्न सकिन्छ । ८.कब्जियत -गर्भीमा प्रायः कब्जियत हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सलादमा काँचो प्याज खानाले कब्जियतको समस्या समाधान हुन्छ । ९. चाँया –टाउको छाला सुख्खा हुने र चाँया पर्ने समस्या गर्मीमा अत्यधिक देखिन्छ । प्याजको रस शिरमा लगाएर सफा पानीले टाउको पखाल्दा राहत मिल्दछ । १०.अरुचि- गर्मीमा भोक कम लाग्छ । काँचो प्याजमा कालो नुन र फ्राइ गरेको जिरा राखेर खानाले भोक लाग्दछ ।
यसरी फलफूललाई लामो समयसम्म ताजा राख्नुस् …
कहिल्यै धनी बन्न दिंदैनन् यस्ता बानीले ! आजै त्याग्नुहोस्….
फोक्सो स्वस्थ राख्न यसरी घरमै गर्नुहोस् उपचार………
तीजमा वर्त बस्दा यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्…..
पत्याउनुहुन्छ ? बेस्सरी हिँड्नाले तपाईको आयु बढ्छ….
यो बार र राशि अनुसार गर्नुहोस् यस्ता काम…..फलिफाप हुनेछ !